चम्किदै भद्रगोलकि जिग्रीकि आमा बरिस्ठेको श्रीमति माकुरी::KhojOnline.com
चम्किदै भद्रगोलकि जिग्रीकि आमा बरिस्ठेको श्रीमति माकुरी
दोलखामा जन्मिएकी रश्मि पाण्डे हास्य सिरियलमा परिचित अनुहार हुन् । एक दसक भन्दा बढी समय यो क्षेत्रमा बिताएकी पाण्डेले टिपन टापन हास्य सिरियलबाट हास्य कलाकारितामा पाइला राखेकी हुन् । कुनै बेलाको चर्चित गरिबको जुनी भन्ने गीतमा आर्यन सिग्देलसंग मोडेलको रुपमा काम गरेकि रश्मिले झन्डै तीन दर्जन जति म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छिन । उनले अभिनय गरेको दिनेश काफ्लेको मेरो दीदी बेच्नेलाइ ‘ मिलन लामाको गरिबको दशैँ ‘बिष्णु खत्रीको जम्बु कश्मिर पार्ट दुइ लगायतका गीतहरुले बजार पिटेका पनि छन । रश्मिकि आमा राधा पाण्डे पनि लोक संगीतमा गहिरो रुचि राख्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ । उहाकै प्रेरणा यो क्षेत्रमा आएको दाबी गर्ने पाण्डे स्कुल पढ्दा पढाई भन्दा बढी नाच गान र नृत्य ध्यान दिने गरेको स्वीकार गर्छिन । ऊनी भन्छिन -म पढाई भन्दा अरु नै कुरामा राम्रो थिए । त्यही भएर कला क्षेत्रमा आएको छु । जसरी रक्सी कहाने बानी लागेको मान्छेले रक्सी छोड्न सक्दैन उसैगरि कलाको मात लागेको मान्छेले कला छोड्न सक्दैन । म चाहेर पनि यो क्षेत्र छोड्न सक्दिन। रश्मि यो क्षेत्रमा आउदै गर्दा लय संग्रौलाको थोरै भए पुगी सरी ( २०६२ )मुनाल घिमिरेको यातना जस्ता सिरियलहरुमा सामान्य रोल गरेर पनि चर्चा आएकी थिइन । ऊनी संकर आचार्यको घरबार मुख्य रोल गरेपछि झन् चर्चामा आएकी थिइन । चर्चित हास्य सिरियल मेरो बास्सैमा राजु मास्टरको श्रीमतिको रोल गरेर धरै चर्चा आएपछि ऊनी भद्रगोलमा प्रबेस गरेकी हुन् । अहिले भद्रगोलमा जिग्रीको आमा र बरिष्ठको श्रीमति रोल गर्दै गरेकी रश्मि पैसा होइन होइन आफ्नु चिनारीदेखि खुसि छिन । उनि भन्छिन मलाई देशभरि व्यापक परिचय दिने सिरियल भद्रगोल नै हो ! म जे छु भद्रगोल कै लोकप्रियताको कारण छु!
म्युजिक ल्याब प्रा.ली. ले अर्को नयाँ लोक दोहोरी गीत बजारमा
बिभिन्न गीत संगीत बजारमा ल्याउने क्रममा फेरी म्युजिक ल्याब प्रा.ली. ले अर्को नयाँ लोक दोहोरी गीत बजारमा उपलब्ध गराएको छ । तुलाराम डांगी क्षेत्रीको प्रस्तुती रहेको गीत फर्की आउदिन मा तुलाराम डांगी क्षेत्रीको शब्द तथा कमल ज्योतीको लय रहेको छ । बिदेसी भुमिमा रहदाको पिडा...
१३ फागुन, काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन भएको छ । हृदयाघातका कारण उनको गएराति दुबईमा निधन भएको हो । फिल्म इन्डस्ट्री भित्रका र त्यस बाहिरका धेरै व्यक्तिहरुले श्रीदेवीको निधनमा शोक व्यक्त गरेका छन् । श्रीदेवीको जन्म १३ अगस्ट १९६३ मा तमिलनाडुमा भएको थियो ।...
म्याग्देली लोक गायक अमित बिश्वकर्मा कतारमा जादै ।।
नेपाली मौलिक लोक भाकाहरु लाई अलि बिशेश सम्झने लोक दोहोरी गायक अमित बिश्वकर्मा पहिलो पटक देश बाहिरको कार्यक्रमको लागी कतारमा जाने भएकाछन । बरंजा ६ म्याग्दीमा जन्मिएका बिश्वकर्मा परिवारको एक्लो छोरा हुन,बुवा हर्क बहादुर बिश्वकर्मा र आमा खमिसरा बिश्वकर्मा को काँखमा जन्मिएका अमित हाल भने स–परिवार...
झापा जिल्लाको सुन्दर नगर गौरादहको जोघरे गाउँमा बि स २०३८ साल असोज १५ गते माता नरबदा गौतम र पिता गँगा प्रसाद गौतमको चार भाइ छोरा मध्येका कान्छा छोरा को रुपमा जन्मिएका रङ्गकर्मी कलाकार घनश्याम गौतम अहिले नक्कली प्रचण्डका रुपमा निकै लोकप्रिय छन । ११ बर्ष सम्मको बालापन जोरघरे गाउँ र गौरादह वरपरको परिबेशमा...
केही वर्षअघि पोर्नस्टार बन्ने चाहेको बताएर चर्चामा आएकी अर्चना पनेरू विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । पोर्नस्टार बन्ने चाहेको अभिव्यत्ति दिएर चर्चामा आएसँगै केही चलचित्रमा समेत काम गरेकी अर्चनाले आफूले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू विवाह बन्धनमा बाँधिएको बताएकी उनले विवाहको तस्विर...